rebuilding.travel nanampy reopeningtourism.com, paikady ara-bola ary adihevitra momba ny toetrandro
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » rebuilding.travel nanampy reopeningtourism.com, paikady ara-bola ary adihevitra momba ny toetrandro
Fanarenana.travel, fikambanana ifotony natombok'i Vondron-tserasera momba ny dia. Rebuilding Travel dia mpitarika fizahan-tany 569 matanjaka ankehitriny. Ny fananganana indray ny mpikamabana dia ao amin'ny firenena 110 sy amin'ny kaontinanta rehetra afa-tsy Antarctica.
Iza no mpikambana sy ao ambadiky ny fanarenana.travel?
Ny mpitarika dia avy amin'ny sehatry ny daholobe, ao anatin'izany ny minisitry ny fizahantany, toa ny Minisitra Hononana Bartlett avy any Jamaika na Najib Bala avy any Kenya. Izy ireo dia lohan'ny fikambanana toa an'i Tom Jenkins, tale jeneralin'ny ETOA, Cuthbert Ncube, filohan'ny Birao fizahan-tany afrikanina, mpanatanteraka avy amin'ny WTTC, IIPT, WFTGA, ary fikambanana maro isam-paritra sy manerantany.
Mpikambana ambony ao amin'ny indostrian'ny MICE, fiaramanidina ary fandraisana vahiny ny mpikambana. Mpikambana avy amin'ny mpandraharaha fizahan-tany, masoivohon'ny fizahan-tany, ary orinasa maro hafa amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany ny mpikambana.
Dr. Taleb Rifai, Doris Woerfel, CEO ATB ary Cuthbert Ncube, filoha ATB
Minisitry ny fizahantany any Jamaika, Hon. Edmund Bartlett (1er R) dia manara-maso ny tatitra momba ny fiarovana ny fizahantany miaraka amin'i Dr. Andrew Spencer (1 L), Tale Mpanatanteraky ny Orinasa Fampandrosoana ny vokatra fizahan-tany, ary Dr. Peter Tarlow (C),
Iza no mitarika fanarenana.travel? Ny mpanorina dia Juergen Steinmetz. Izy koa dia mpanonta eTurboNews, olona manan-danja dia ahitana ny Dr. Taleb Rifai, sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha, Alain St. Ange, kandidà ho an'ny filoha Seychelles teo aloha, Dr. Peter Tarlow, lehiben'ny safertourism.com
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fomba hidirana dia mankanesa any www.panontrip.travel/register
Ny fifanakalozan-kevitra virtoaly tato ho ato amin'ny fananganana indray. Dia nanohina ny lafiny maro tamin'ny indostria ny momba ny fomba fijery zava-misy vaovao, izay atrehin'ny rehetra noho ny COVID-19.
MAIMAIMPOANA: TSY MAINTSY ATO AMIN'NY Fivoriana Virtoaly
Hisy hetsika virtoaly ho avy:
1) Famerenana amin'ny laoniny ny toetrandro miaraka amin'ny profesora Geoffrey Lipman. Efa nomanina ho 4, 9 Jona maraina ora Eropa. fampahalalana bebe kokoa eto
2) Paikady ara-bola amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny hoavin'ny dia sy fizahan-tany miaraka amin'ny ITIC, nomanina for 10 Jona amin'ny 9.15 BST. fampahalalana bebe kokoa eto
Mikasa ve sa efa misokatra ny fizahantany?
Nanomboka androany ny fisokafan'ny fizahan-tany miaraka amin'ny sehatra iray izay azon'ny tsirairay amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany afaka miditra sy mizara ny fepetra fanokafana sy fiarovana azy ireo indray. Ny mpikambana dia mety hahazo dokambarotra sy consulting ary fanombanana. Ny sehatra dia natao hampiroboroboana ny dia sy fizahan-tany mankany amin'ny toerana alehanao na toerana misy anao.
Raha mila fanazavana fanampiny fitsidihana www.rgfomagra.com